Ciise Jiijiile oo Maanta la aasay, kadib markii la qanciyay Eheladiisa, Maxaa lagu qanciyay,? – Hornafrik Media Network
Ciise Jiijiile oo Maanta la aasay, kadib markii la qanciyay Eheladiisa, Maxaa lagu qanciyay,?
Taliye Ku Xigeenkii hore ee Nabadsugidda Gobalka Banaadir, Ciise Jiijiile ayaa lagu aasay Maanta Degmadda Dayniile ee Gobalka Banaadir, kadib markii lagu qanciyay Eheladiisa inay ka tanaasulaan Go’aankii ahaa inaysan aasayn illaa iyo inta lala aasayo kuwii dilay.
qaar ka mida Eheladda Marxuum Ciise ayaa u sheegay Hornafrik inay la kulmeen Xalay Raiisul Wasaare, Xasan Cali Khayre oo u ku qanciyay inay aasan Maydka. Wuxuuna u ballanqaaday Raiisul Wasaaruhu in Cadaaladda la hor keeni doono Saraakiishii iyo Askartii dishay Marxuumka, kuwaas oo uu haddaba sheegay inay qaarkood xiran yihiin.
Eheladda Marxuumka ayaa iyana dhinacooda dalbaday in la soo xiro Saraakiil hor leh oo la tuhunsan yahay inay lahaayeen Amarka lagu dilay Ciise Jiijiile, kuwaasoo uu ka mid yahay Gaashaanle Dhexe Cumar C/raxmaan. Waxaana Raiisul Wasaaruhu uu aqbalay Codsiga Eheladda, isagoo u yeeray Guddiga arrintan baarayay si ay ula wadaagaan Ehelku xogta ay hayaan.
Aaska Allaha u naxariistee Ciise Jiijiile ayaa waxaa ka qayb galay Saraakiil Ciidan, Taliyayaal, Dadwayne iyo Xubno ka tirsan Golayaasha Dawladda.
Xog: Maydka Col Ciise Jiijiile oo ay diideen Beeshiisu in la aaso, Maxay tahay sababtu,?
Dawladda Somalia oo shaacisay Nooca Lacagta ay soo daabacanayso.